Miara-miasa amin'ny Organisations Philanthropic ve ianao? | Martech Zone
Alarobia, Novambra 15, 2006 Talata, Novambra 21, 2017 Douglas Karr
Androany dia niditra ho mpikambana ao amin'ny komitin'ny asa soa ataon'ny orinasako aho, ExactIMPACT. Tsy manana fotoana na loharanom-bola hiverina foana aho ka nanapa-kevitra ny hanao asa soa any amin'ny toerana andaniako fotoana betsaka indrindra! Ity Thanksgiving ity dia toa manjombona tokoa ho an'ireo fikambanana mpanao asa soa izay miambina olona marobe ao amin'ny fiarahamonintsika izay tsy afaka mikarakara ny tenany. Fanambarana tena mampalahelo izany noho ny tanjaky ny toekarentsika. Antontan'isa iray tokony hotadidina fa rehefa mandrefy ny tsy fananan'asa ny olona dia manisa fotsiny ireo olona mampiasa ny volan'ny tsy an'asa. Betsaka ny olona tsy an'asa ary mitady asa tsy afaka mahazo azy ireo.
Amin'ny firoboroboana ara-toekarena rehetra, ireo orinasa no tena miroborobo. Raha mbola tsy nanana fotoana hijerena an'io ianao dia manoro hevitra aho Ny orinasa. Misintona tady 'lefty' ilay sarimihetsika, saingy tiako ny sary mihetsika ankapobeny amin'ilay sarimihetsika… izany hoe ny 'orinasa' dia tsy manana adidy hafa afa-tsy ny mitady tombony. Izany no adidy tokana ananan'ny stock amin'ny stockholder.
Vokatr'izany, orinasa maro no tsy mandray anjara amin'ny asa soa sy asa soa hafa. Tena mampalahelo izany. Nefa orinasa maro no manao, ary tsy maheno momba azy ireo matetika ianao. Scott Dorsey, CEO an'ny ExactTarget, niresaka androany momba ny Salesforce sy ny herin'ny asa soa filoham-pirenena. Tsy haiko mihitsy! Nahita lahatsoratra vao haingana aho izay miresaka momba azy:
Benioff dia nanome toky fa ny orinasa dia naka maodely fanomezana 1% ny fitoviana, 1% ny tombom-barotra ary 1% ny fotoanan'ny mpiasa hatrany am-piandohana. Salesforce.comâ's's IPO tamin'ny fahavaratry ny 2004 dia namadika avy hatrany ny 1% -n'ny fananam-bola ho fananana mitentina $ 12 tapitrisa, namadika ny fototra ho fikambanana lehibe iray alina. Saingy ny fanomezana ny fotoanan'ny mpiasa no lafiny manan-danja indrindra amin'ny fandaminana amin'ny fijerin'i Benioffâ satria manome antoka ny fandraisan'anjaran'ny orinasa iray manontolo amin'ny programa filantropika, izay misy akony lalina amin'ny kolontsain'ny orinasa.
Mihaika ny komitintsika i Scott handamina ny ezaka ataontsika ho toy ny Salesforce ihany. Fanamby tena tsara izany! Ny asa toy izany dia tena mahafaly. Faly aho fa anisan'ny komity sy anisan'ny orinasa. Raha mino ianao fa tokony hanao zavatra bebe kokoa ny orinasa, angamba tokony hanomboka hanontany ny mpivarotra anao ianao hoe ahoana ny fomba famerenany ny fiarahamonina. Raha misy fanerena bebe kokoa ho an'ny orinasa hanao bebe kokoa, dia tsy hahazo ny fahombiazana tadiaviny izy ireo raha tsy malala-tanana. Ny iray amin'ireo fikambanana tadiavinay hanampy dia ny Wheeler Mission:
Statin'ny Wheeler Mission, Indianapolis:
Misy hatrany amin'ny 15,000 ireo olona tsy manan-kialofana eto an-tanànantsika isan-taona
Trano fandraisam-bahiny nomena: 5,960
Isan'ny sakafo natolotra: 19,133
Kitapo fivarotana enta-mavesatra nozaraina: 434
Lehilahy 68 no tao amin'ny fandaharanay "filàna manokana": mihoatra noho ny teo aloha tamin'io fandaharana io izany
Amin'ny fanamarihana mitovy amin'izany, Ny asa fitoriana Wheeler eto amin'ny tanàna dia tena mila ny fanampianao amin'ity taona ity. Raha azonao atao, alatsaho ny sakafo sasany: Torkia, Makaroni an-trano sy fromazy, famenoana, tsaramaso maintso, salady maintso, saosy vaovao vita amin'ny cranberry, horonana fisakafoanana, Apple Cider, mofomamy ary mofo. Azonao atao koa ny manome fanomezana an-tserasera! Wheeler koa dia mitady mpilatsaka an-tsitrapo 100 hanampy amin'ny Drumstick Dash, mpamatsy vola lehibe indrindra amin'izy ireo.
Tags: benioffmarinaprectargetsalesforcescorr dorseyny orinasany iraka mpitondra kodiarana